Gantaallo lagu garaacay caasimadda Eritrea ee Asmara iyo wararkii ugu dambeeyay | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Gantaallo lagu garaacay caasimadda Eritrea ee Asmara iyo wararkii ugu dambeeyay
Gantaallo lagu garaacay caasimadda Eritrea ee Asmara iyo wararkii ugu dambeeyay
Xoogaga Tigray-ga ayaa caawa gantaalo culculus la beegsaday caasimadda Eritrea ee Asmara kadib markii ay duqeeyeen garoonka diyaaradaha Gobolka Amxaarada.
Hoggaamiyayaasha gobolka Tigray-ga dalka Ethiopia ayaa maanta ku hanjabay inay weerari doonaan Eritrea, ayaga oo sidoo kale sheegtay weeraro lagu qaaday garoomo diyaaradeed oo ku yaalla gobolka Amxaarada.
Weerarada lagu qaaday garoomada – iyo hanjabaad la xiriirta kuwa kale oo dheeri ah oo caawa dhacay – ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in dagaalka uu saameeyo gobolka oo dhan, xilli Abiy uu sheegay inuu yahay mid kooban oo ujeedo kooban laga leeyahay.
Weerarada oo dhacay caawa ayaa lala beegsaday goobo ka mida Eritrea oo deris la ah kan Tigray-ga.
“Caawa, waxyeello xun ayay gaarsiiyeen goobo militari oo ku yaalla Eritrea,”
War horey uga soo baxay TPLF oo ay ku sheegeen in askar Eritrean-ah ay ku lug leeyihiin dagaalka, taasi oo Itoobiya ay beenisay.
Hogaamiyaha TPLF Getachew ayaa ku hanjabay in TPLF aysan ka laba labeyn doonin inay weerarto goobo ku yaalla gudaha Eritrea, oo ay ku jirto caasimadda Asmara oo caawa weerar lagu qaaday xagaas oo wali si rasmi ah loo xaqiijan iyo khasaara inta uu leeg yahay.
“Haddii ay weerar nooga soo qaadaan Asmara ama Bahir Dar, waxaa naga go’an inaan qaadno tallaabooyin aargudasho ah. Waxaan gantaallo la beegsanay goobo cayiman, oo dheeri ku ah garoomada diyaaradaha,” ayuu yiri Getachew Reda.